9 Amazing iberibe Of Modern London Architecture | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | England, London, Ihe ị ga-ahụ
Ejila ụdị ihe owuwu mara ọtụtụ obodo ochie. Ha ebiela ọtụtụ narị afọ ma eleghị anya gafere agha ma ọ bụ ọgba aghara obodo, ya mere n'okporo ámá ha na ụlọ ha bụ ngosipụta nke ịdị adị ogologo oge ahụ.
Isi obodo United Kingdom bụ otu n'ime obodo ndị a. Ka ọtụtụ narị afọ na-agafe London enweela ụdị ụlọ dị iche iche a na-ahụkwa ya n'ihu ọha, ụlọ nke onwe ya na ụlọ ọrụ ndị ọzọ ma ọ bụ atụmatụ ndị mepere emepe. Mana nke bu eziokwu bu na n’ime iri afo ndi gara aga, o burula obodo nwere ịtụnanya ije nke oge a. Emegharịrị London na XNUMXst narị afọ.
1 Banyere London
2 Ọdịdị ọgbara ọhụrụ na London
2.1 Ndị Gherkin
2.2 Towerlọ Heron
2.3 Lọ elu 42
2.4 Halllọ nzukọ obodo London
2.5 Lọ Lloyd
2.6 London Anya
2.8 Ihe ngosi
2.9 Akwa Millennium
London bụ isi obodo United Kingdom na obi ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ọdịbendị na akụ na ụba ya. Ọ dị n’akụkụ Osimiri Thames, ọ dịkwa puku afọ abụọ. Ọ bụ ndị Rom hiwere ya ma nwee n’oge ahụ aha nke Londoninium ókèala ahụ bụ Roman Briten.
Mgbe alaeze Rome dara ebe a, ihe mere na ndị fọdụrụ na Europe mere: agbụrụ ndị mba ọzọ gara n’ihu obodo ahụ na a Ebe obibi Anglo-Saxon were udi. N'agbanyeghị ahụhụ ọtụtụ mwakpo Viking, London agaghị ada ọzọ ma ọ ga-agafe oge ochie na oge ndị ọzọ.
N'ụzọ dị otú a taa anyị na-ahụ n'okporo ámá ya na e nwere ihe atụ nke dị iche iche architectures: Medieval Renaissance, Georgian na dịka anyị kwuru n’elu, site na oge ruo na akụkụ a ọtụtụ ihe atụ nke ụlọ ọgbara ọhụụ kachasị mma n’ụwa.
Ọdịdị ọgbara ọhụrụ na London
Ọtụtụ n'ime ihe atụ kachasị mma nke ụlọ ọgbara ọhụrụ ha bụ na mpaghara ego. Anyị nwere Lọ Lloyd, nke Millennium Dome, Helọ elu Heron, nke Akwa Millennium, nke Shard London Bridge, Ndị Gherkin, na London Anya, na Lọ elu 42 na Halllọ nzukọ obodo London n'etiti ndị ọzọ. Ka anyị lelee ụfọdụ anya kpọmkwem:
Ezigbo aha nke a ụlọ iconic london ọ bụ 30 St Mary Ax. Ọ bụ skyscraper azụmahịa na mpaghara ego. Ewu ya malitere n’afọ 2003 wee kwụsị otu afọ ka e mesịrị. O nwere ala iri anọ na otu, ọ dịkwa mita 41. Ọ bi ebe ụlọ ewubere maka azụmaahịa na ego mebiri na mwakpo IRA na 1992.
Ọ bụ ụlọ ike ịrụ ọrụ, nwere usoro ikuku ventilation na usoro nke na-enyere aka ịchekwa okpomọkụ na oyi, dabere na oge.
Sklọ elu a Ọ dị narị mita abụọ na iri atọ n’ogologo ekele nke mast 28. Ọ bụ ụlọ kacha elu na london. Owuwu ahu bidoro na 2007 ma wuchaa ya na 2011. O nwere nnukwu uzo na ebe nnabata na enwere aquarium nwere ihe karịrị azụ 1200. Ọ bụ aquarium kachasị nke onwe ya na mba ahụ.
E nwekwara ụlọ mmanya - ụlọ oriri na ọ restaurantụ onụ na ala mbụ na ala 38 ruo 40 ụlọ oriri na ọ andụ andụ na ụdị mbara igwe - ogwe osisi nwere mpụga nke a na-eru na elevator elekere, ya bụ, ihe nghọta.
Lọ elu 42
Es otu n’ime ụlọ elu kacha elu na London e wuru ya ka ọ nwee ụlọ ọrụ nke Westminster National Bank. E wuru ya na 70s na formally meghere na 1981. Queen Elizabeth II mere ya na gala na ihe niile. Nwere 183 mita elu na na na 2009 na Heron Tower karịrị ya mgbe iri afọ atọ nke ọchịchị.
Ọ bụ ụlọ ọrụ azụmahịa na isi ụlọ ọrụ. Na 90 afọ tara ahụhụ IRA Ọ kpatara oke mbibi ma weghachite ya n'ime na n'èzí.
Halllọ nzukọ obodo London
Ọ bụ oche nke ọchịchị ọchịchị obodo ahụ ma dịkwa na ndịda ụsọ mmiri nke Thames. Nwere a kama ọhụrụ imewe nke na-agbaso echiche nke ịchekwa ike site na mbenata elu nke usoro ahụ n'onwe ya. Ọ naghị arụ ọrụ, dị ka ọmụmụ mechara.
Fọdụ mmadụ jiri Citylọ Nzukọ London dị ka àkwá ma ọ bụ tụnyere ya nkpuchi darth vader, si Star Wars na obere uto onye akpọkwara ya "iko testicle". Kedu ihe ị chere? Banyere imewe, o nwere Meterzọ ụkwụ elliptical 500 yiri Guggenhaim Museum na New York nke na-esi na isi ruo n'isi nke a 10 ụlọ ụlọ.
Ọ nwere a oche ndozi nke na-emeghe oge ụfọdụ maka ọha na eze, mana ka ị na-arịgo n'okporo ụzọ ị ga-ahụ n'ime ụlọ ahụ na gburugburu ya.
Lọ a ọgbara ọhụrụ bụ na mpaghara ego ọ bụkwa otu n’ime isi ụlọ ọrụ ama ama dị na Lloyd’s Insurance House. E wuru ya na 70s ma mepee ya n'etiti 80s, ọzọ site n'aka Queen.
Lọ a ọgbara ọhụrụ nwere igwe mbuli elu, steepụ, ọdụ ike na ọkpọkọ n'èzí, na ụdị nke Center Pompidu¡ou na Paris. Ọ na-emi esịnede atọ isi ụlọ elu gbakwunyere atọ ọrụ ụlọ elu gburugburu a Central akụkụ anọ ohere.
Halllọ nzukọ, atriumO nwere uko iko di n’elu ma nwe oghere na ndi mgbali n’ebe nile. Jikwa a ngụkọta nke Ogwe 88, o nwere okpukpu iri na anọ.
Es London Ferris Wheel, ọhụụ ọhụụ nke kpochapụwo Ferris wiil na anyị na-ahụ na obodo ndị ọzọ nke ụwa. Ọ dị n’akụkụ ndịda nke osimiri ahụ, a makwaara ya dị ka Wheel Millennium. Ọ dị mita 183 n'ogo ma nwee mita 120 n'obosara.
Wheelgbọ okporo ígwè wuru na 1999 na ọ bụ tallest wheel Ferris na ụwa ruo mgbe Nanchang e wuru, ma ọ bụ ka kasị elu na Europe. Ọtụtụ nchara, ọtụtụ eriri na ụfọdụ nnukwu gondolas ndị dị ka akụkọ sayensị.
Mgbe emume nke mmalite nke puku afọ nke atọ na London malitere, e wuru ụlọ a na mpaghara Greenwich peninsula, na ndịda ọwụwa anyanwụ nke obodo ahụ. Ihe ngosi ahụ dịgidere na Disemba 2000.
Es otu n’ime nnukwu ụlọ dị n’ụwa. Ọ na-acha ọcha ma nwee ụlọ edo edo 12, otu maka ọnwa ọ bụla nke afọ ma ọ bụ otu maka elekere ọ bụla nke elekere, anyị nọ na Greenwich ugbu a. The dome Ọ dị narị mita abụọ na iri atọ n’ogologo n’etiti ma mee ya na akụkụ ya faiba glaasi eguzogide oge nke oge.
Ọ bụ a elu-ụlọ elu akụkọ 95-elu. O nwere ntakịrị karịa 300 mita dị elu wee malite iwu ya na 1999 ka emechaa na 2012. Ọ bụ nke Renzo Piano haziri, ama-atụ ụkpụrụ ụlọ na ọtụtụ iconic oge a ụlọ na owuwu ya otuto.
Ọ nwere ọdịdị gburugburuO yiri ka ọ na-esi n'osimiri ahụ pụta, ọtụtụ iko na n'echiche m, ọdịdị dị nro. Ọ bụ ụlọ oru oma oriri ike yana ala ya nwere ụlọ ọrụ azụmahịa, ụlọ nri, ụlọ akwụkwọ azụmaahịa oge ụfọdụ, ọfịs Al Jazeera dị na London, ụlọ nkwari akụ, ụlọ oriri na ọ obserụ andụ na ụlọ oriri na ọ .ụ obserụ.
Ọ bụ nkwusioru ígwè na-agafe agafe nke gafere osimiri Thames. Jikọta obodo na Bankside. Emere ya na uzo ato, nke obula toro ogologo ma rue ogologo, rue rute akwa ngụkọta ogologo nke 325 mita kwụsịtụrụ na eriri, asatọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » England » London nwekwara ụlọ ọgbara ọhụrụ
Katidral kachasị mma na Spain